Zavakanto & Kolontsaina · Jolay, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Jolay, 2008
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Jolay, 2008
Borazila: Niala tsy ho minisitry ny kolontsaina
Amerika Latina 31 Jolay 2008
Maro ny bolongana no nitatitra fa nandao ny toerana mahaminisitry ny kolontsaina azy, deparitemanta nentiny hatrmin'ny 2003, i Gilberto Gil . Mieritreritra ny hanao laharam-pahamehana ny asa mahampihira azy indray izy.
Iran: Toerana maro noraisina ho vakoka iraisam-pirenena
Blogian no miresadresaka amintsika ny fampidirana ny monasitera Armeniana 3 any Iran ho ao anaty ny lisitry ny vakoka iraisam-pirenena alahatry ny UNESCO. Raha nahafaly ny mpamaham-bolongana izany hetsika izany, dia nahasosotra azy kosa ny tsy nihetsehan'ny UNESCO raha nisy vohitra Armeniana any ankodahodan'i Azerbaijan any Nakhichevan rava.
Amerika Avaratra 07 Jolay 2008